Talooyin maskaxda lagu hayo ka hor inta aan la qaadan eey weyn | Ragga Stylish
Haddii aad tahay eey jecel, waxaad u maleyn kartaa inaad mid korsato. Waana laga yaabaa inay taasi tahay aad rabto inaad weynaato, haddii ay dhacdo inaad haysato meel kugu filan.
Haysashada xayawaanku ma laha qalab ay ku ciyaaraan, xitaa way ka sii yaraanayaan haddii ay eey weyn yihiin. Waxaad u baahan doontaa daryeel iyo baahiyo, la xiriira cuntadaada, tallaalada, cudurada, socodka iyo dibedda si aad u dhaqaajiso muruqyadaada, iwm.
1 Ey ama ey weyn
2 Faa'iidooyinka eeyaha waaweyn
Ey ama ey weyn
Qiyaas ahaan, eeygu wuxuu bislaadaa markuu gaaro 18 bilood ee nolosha. Hoyga iyo hoyga waxaad ka heli doontaa nuqulo badan oo eeyaha waaweyn ah, si aad u korsato. Iyada oo leh noocyo qeexan iyo xayawaan iskutallaab ah. Qof kasta oo aan lahayn nooc saafi ah waa inuusan caqabad ku noqon. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay waxay noqon kartaa xayawaan leh sifooyin badan.
Waxa kale oo jira ikhtiyaarka qaadashada eeyga laga soo bilaabo da'da yar, maadaama ay tahay eey. Xaaladdaas oo kale, waxaad ku tababbari kartaa adiga dariiqaaga, adoo si fiican u baraya caadooyinkaaga iyo waxa noloshiisu mustaqbalka noqon doonto.
Faa'iidooyinka eeyaha waaweyn
Khubaro badan ayaa taas xaqiijinaya eyga weyn ayaa ka aqoon iyo tababar yar kan yar. In kasta oo ay u muuqato in cabirkoodu u dhigmayo dabeecad badan, haddana waa dhab oo eeyaha yaryar u muuqdaan inay leeyihiin, tirakoob ahaan, iska caabin badan xagga tababarka.
Eeyo waaweyn ayaa sidoo kale la caddeeyay waxay si fiican ula qabsadaan dabaqyada iyo meelaha yaryar. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku habboon yihiin la noolaanshaha carruurta.
Ey weyn waxay leedahay tamar badan waxayna sidoo kale ubaahantahay inay gubto. Sidaa darteed, milkiile ahaan waa inaad sidoo kale leedahay awood jireed iyo mid caabin. Waxay ku saabsan tahay helitaanka isku dheelitirnaan. Waxyaabaha kale, sababtoo ah socodka ma awoodi doontid inaad xakameyso xoogooda.
Marka ay timaado cuntada, eeyaha waaweyn ayaa wax badan cuna, kharashyada ayaa ka badan. Sidoo kale cadayashadu waxay qaadataa waqti dheeri ah, nadaafadu waa shaqo badan, iwm.
Ilaha sawirka: Waqtiga Riyada / El País
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Ma jeceshahay inaad korsato eey weyn?
Afar siyaabood oo loogu daro tuxadaada 'Xilliga Xisbiga'